Abafundi abaninzi abakwazanga ukugqiba isikolo samabanga aphakamileyo ngezizathu ezininzi kodwa izizathu eziqhelekileyo kukunqongophala kwemali, imiceli mngeni yezempilo, okanye abasenamdla wokufumana imfundo ngelixa ezinye inokuba zizizathu zobuqu.
Nokuba siyintoni na isizathu kodwa ukuba ufuna ukubuyela umva, qhubeka, kwaye ugqibezele isikolo samabanga aphakamileyo ke eli nqaku liza kukukhokela kwaye ngeli xesha uyakonwabela ukukhwela ngokupheleleyo ukufumana idiploma ongayi kuchitha imali ekufumaneni. .
Ngokungafaniyo nenkqubo yokufunda yesiNtu, awuzukuya kuzo naziphi na iiklasi zomzimba, zobuso ngobuso, okanye ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngaso nasiphi na isizathu, yonke imisebenzi, iinkqubo, kunye neenkqubo ziya kwenziwa kwi-intanethi. Oko kukuthi, uya kuthatha iiklasi zakho kwaye ufunde kwi-intanethi kunye nokwenza izabelo, umsebenzi waseklasini, iimvavanyo, kunye neemviwo kwi-Intanethi.
Ukufunda kwi-Intanethi yeyona nto ikhoyo ngoku kwindawo yemfundo kwaye ngesitayile samva nje sokufundisa nokufunda, kuya kufuneka ungene.
Kwaye okokugqibela, kwabo bangasayifumaniyo inkqubo yokufundisa yemveli okanye isimbo sesikolo esiphakamileyo esinomdla kwaye kwafuneka bayeke, idiploma yesikolo samabanga aphakamileyo kwi-intanethi ngaphandle kweendleko kubantu abadala ibonelela ngendlela entsha, yanamhlanje, ephucukileyo yokufunda.
Nokuba leliphi na kula maqela abantu ungowakho, uyonwabela ukuguquguquka kokufunda kwi-Intanethi, oko kukuthi, ungaqhubeka nolunye uxanduva ngelixa ugqibezela imfundo yediploma yesikolo samabanga aphakamileyo kwi-Intanethi.
8.1 Ngaba ndingayifumana idiploma yam yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi?
8.2 Ixabisa malini ukufumana idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi?
8.3 Yeyiphi eyona nkqubo yesikolo esiphakamileyo yediploma yabantu abadala?
Esi sesinye sezikolo eziphakamileyo zasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kweendleko kubantu abadala kwaye sisimahla kuphela kubafundi beSikolo samaBanga aPhakamileyo saseArizona abangaphantsi kweminyaka engama-22 ubudala. Izifundo zibanjwa ngokupheleleyo kwi-intanethi kwaye zinemiyalelo esekwe kwividiyo, iimvavanyo ze-intanethi, iikhwizi, amanqaku e-intanethi, kunye nemisebenzi.
Isikolo samabanga aphakamileyo samkelwe ngeCognia, esisigunyaziso esisemthethweni, ke isiqinisekiso sakho sediploma samkelwe ngokulinganayo.
Isikolo se-Keystone sesinye sediploma yesikolo samabanga aphakamileyo sasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kweendleko kubantu abadala, abafundi banokukhetha kwiindlela ezahlukeneyo zemfundo ukuze bafezekise iinjongo zabo. Ayinamsebenzi nokuba ufuna ukufunda ixesha elizeleyo okanye ufuna nje izifundo zomntu ngamnye.
Njengomntu omdala, unokukhetha ukufumana idiploma yamabanga aphakamileyo okanye ufunde izakhono ezitsha zokuqhubela phambili nomsebenzi wakho kwaye ungabhalisa nangaliphi na ixesha.
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwediploma yesikolo samabanga aphakamileyo sasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kweendleko zabantu abadala yiNCDCE, sisikolo esivunyiweyo, semfundo yomgama esibonelela ngamathuba emfundo kubafundi abasuka naphi na emhlabeni.
Ufuna kuphela uqhagamshelo lwe-intanethi oluzinzileyo kunye nePC esebenzayo ukuze ujoyine inkqubo yediploma yabantu abadala kwaye ufumane isatifikethi esinokukufumana umsebenzi ongcono kakhulu.